Paositra malagasy: “mivoatra ary afaka mifaninana amin’ny sehatra tsy miankina” | Région Boeny
“Mampiditra teknolojia vaovao ao anatin’ny fomba fiasa ny Paositra Malagasy ankehitriny ka afaka mifaninana amin’ny tsy miankina ary mampiroborobo ny sehatra ara-barotra”. Hoy ny Tale jeneralin’ny Paositra, Razafimanantsoa Stéphanoel Richard nandritra ny atrik’asa iraisam-paritany notanterahin’ireo mpiasan’ny Paositra eto Mahajanga sy ireo avy any Antsiranana tany amin’ny Zahamotel Amborovy ny Alatsinainy 15 jona 2015.
Jeri-todika ny zava-bita sy fizohina ary fanaovana jery lavitra ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fandraharana ara-barotra eo anivon’ny Paositra malagasy no votoatin’ity atrikasa izay haharitra telo andro ity. Ny ministry ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Teknolojia, Rakotomamonjy André Neypatraiky, no nitarika izany, notronin’ireo tompon’andraiki-panjakana eto Mahajanga.
Tsy mionona amin’ny fomba fiasa nahazatra hatrizay intsony ny Paositra malagasy fa manitatra sy manatsara amin’ny alàlan’ny fampiharana ireo paika irasaisam-pirenena hoy ny Tale Jeneraly. Anisan’izany ny IPS (International Postal System) ahazoana manara-maso amin’ny alàlan’ny tranokalam-pifandraisana ny zotran’ny taratasy sy ny fonosan’entana rehetra nalefan’ny mpanjifa. Hatreto ny paositra aloha no manana an’io fitaovana io fa eo am-panaovana an’izany ho azon’ny mpanjifa ampiasaina koa izahay hoy izy.
Voalazany fa am-pametrahana ny IFS (International Financial System), paika iraisam-pirenena entina hanatsarana ny serasera ara-bola ihany koa ny Paositra. Fomba iray ahafahan’ny mpanjifany mampiasa karatra elektronika handoavam-bola amin’ny Paositra eny amin’ireny Mpizara vola mandeha hoazy ireny na Distributeur Automatique des Billets, izay ho apetraka manerana Madagasikara.
Notanterahina nandritra ny atrikasa ihany koa ny fanaovan-tsonia mikasika ny fanotana sy famoahana ny hajia vaovao roa: iray maneho karazana gidro fahita amin’ny faritra avaratra atao hoe Simpona fotsy ny iray maneho karazam-bonikazo antsoina hoe Aboringa na Farafaka.
Nararaotin’Atoa Ministra fihaonana nitafatafana tamin’ny mpiara-miasa “hahafahana maka lesona hiatrika ny tena fampandrosoana fa tsy ho voasariky ny sangodim-panin’ny toe-draharaha politika nafampana tato ato izay.
Nampatsiahiviny ny datin’ny 17 jona izao, izay ho fivadihana amin’ny TNT (Télévision numérique terrestre) ka hosantariana amin’ny fomba ofisialy any Nosy-be Hell Ville.
Antananarivo, Fianarantsoa ary Toamasina dia efa samy nahavita ny atrik’asa toy izao. Any Toliara indray ny manaraka.